Wariye ka tirsan teleefishinka Somali Cable oo xabsiga loo taxaabay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wariye ka tirsan teleefishinka Somali Cable oo xabsiga loo taxaabay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in ciidamada nabad-sugidda ee maamulka Puntland ay goordhaw xabsiga u taxaabeen wariye Cumar Saciid Maxamed.
Wariye Cumar Saciid Maxamed oo sida la sheegay ahaa wakiilka teleefishinka Somali Cable xaruntiisa magaalada Garoowe ayaa loo maleeynayaa inuu xarigiisa salka ku haayo wareeysi uu dhawaan la yeeshay xildhibaano ka tirsan maamulka Puntland, kadibne uu baraha bulshada ku faafiyay.
Wareysigaasi ayaa ahaa mid ay xildhibaanada Puntland kaga hadlayaan lacagaha shillin soomaaliga ee faalsada ah oo maalmihii ugu dambeysay ku faafay suuqyadda gobolada Soomaaliya.
Xildhibaanada baarlamaanka Puntand ayaa madaxda maamulkaasi ku eedeeysay inay shirko ku yihiin makiinada lacagtaasi faalsada ah sameeysa, waxayna arrintaasi keentay in madaxda maamulkaasi ay hadaladaasi ka caroodaan islamarkaana ay xabsiga dhigaan wariye Cumar Saciid Maxamed.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay inay soo daabici doonto lacago shillin soomaali cusub, taas oo ay kaga hortageeyso lacagaha faalsada ah iyo kuwa duuga ah ee muddooyinkii ugu dambeysay soo batay.